Wararkii ugu Dambeeyay ee Degmada Afgooye
Loading...	Home Wararka Wararkii ugu Dambeeyay ee Degmada Afgooye
Wararkii ugu Dambeeyay ee Degmada Afgooye	Thursday, 24 May 2012 19:54	Wararka naga soo gaaraya Magaalada Afgooye ayaa waxa ay sheegayaan in Xarakada Al-Shabaab ay siidaayeen maxaabiistii ku xirnayd xabsiga dhexe ee degmada Afgooye.
Dadka deegaanka ayaa sheegaya in dareen feejignaan ah ay ka jirto degmada, dadkuna ay dhagaha u taagayaan is bedelada socda, kadib markii lagu arkay ciidamo badan oo dhinaca deegaanada loo barakacay ka yimid, iyadoo ay jiraan ciidamo kale oo u gudbay degmada Marko iyo Baraawe.
Maxaabiista ay Al-Shabaab ooda ka qaadeen ayaa loo haystay dambiyo kala gaddisan, waxaana ay caddeynasaa culayska baaxadda leh oo ay soo saareen ciidamada dawlada iyo AMISOM.
Sidoo kale dadka deegaanka ayaa sheegaya in Shabaabka ay geedi sii yihiin, maadaama ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ku soo dhowaanayaan.
Balse waxaa jira wali deegaanno ka mid ah kuwa loo barakacay oo ay Xoogaga Shabaab ay ku suganyihiin halkaa oo lagu arkay gaadiidka dagaalka oo difaacyo kaga jira